NorthernAlliance (Burma) – Page2– Northern Alliance (Burma)
Author: NorthernAlliance (Burma)
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များ တတိယအကြိမ် မျက်နှာစုံညီ ပန်ခမ်းအစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များ တတိယအကြိမ် မျက်နှာစုံညီ ပန်ခမ်းအစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၄) ရက်။ ပန်ခမ်းမြို့။
By Nan Lwin Hnin Pwint7February 2017 Arakan Army (AA) chief Brig-Gen Tun Myat Naing recently spoke to The Irrawaddy about the conflict between the Burma Army and the Northern Alliance—whose members are comprised of the Kachin Independence Army (KIA), Ta’ang National Liberation Army (TNLA), Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA), and the AA. […]
AA စစ်ဦးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်နဲ့ ဧရာဝတီသတင်းဌာနတို့တွေ့ဆုံးမေးမြန်းခန်း
Irrawaddy5February 2017 တပ်မတော်နဲ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် တပ်ပေါင်းစုအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခတိုက်ပွဲများ၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စစ်ရေး နိုင်ငံရေး အခြေအနေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်၌ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ၊ မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့နှင့် UWSA “၀”တပ်ဖွဲ့တို့ကြား စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ၊ ရက္ခိုင့် တပ်မတော် (AA) အဖွဲ့ ရဲ့ ရပ်တည်မှု သဘောထားတို့ကို ဧရာဝတီ အကြီးတန်းသတင်းထောက် နန်းလွင်နှင်းပွင့် က AA စစ်ဦးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်ကို မေးမြန်းထားပါတယ်။ မေး။ ။ မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ စစ်ရေးအခြေအနေ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေက လက်ရှိမှာ ဘယ်လို အခြေအနေတွေရှိလဲပြောပြပါဦး။ ဖြေ။ ။ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ရဲ့ စစ်ရေးအခြေအနေကတော့ လောလောဆယ် ထိုးစစ်ဆင်တဲ့ […]
In recent months the KIO’s armed wing, the Kachin Independence Army, has come under sustained attack by the Tatmadaw, resulting in the loss of several key mountain posts and bases. These offensives have put IDPs in the firing line, prompted the Northern Alliance counter-offensive in northern Shan State in late November and jeopardised progress at […]
The released statement of Northern Alliance (Burma) on peace dialogue No. 1/2017 Date: 23 January 2017 At the invitation of H.E. Mr. Sun Guoxiang, Special Envoy of Asian Affairs of the Ministry of Foreign Affair of China, on 19 January 2017, our Northern Alliance-Burma (KIA, TNLA, MNDAA, and AA) heldameeting with H.E. Mr. […]
Battle News on 23 Jan 2017
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၃) ရက်တိုက်ပွဲသတင်းများ (၁) ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်၊နေ့နံနက်(၆) နာရီ(၃၅)မိနစ်မှ(၁၀)နာရီ (၃၀)မိနစ်အချိန်ထိကွက်ခိုင်မြို့နယ်၊ပန်လုံကျေးရွာနှင့်ပန်ကူကျေးရွာကြားတွင် မြန်မာစစ်တပ်၏ခမရ(၅၆၇) နှင့် ခမရ(၂၀၃) တို့ဖြင့်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ (၂)ရန်သူသည် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ လက်နက်ကြီးပစ်ကူများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သော်လည်း မိမိတို့အနေဖြင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိဘဲ လက်နက်ကြီးကျည်များမှာ ရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်များနှင့်အခြားနေရာများသို့သာကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုက်ပွဲသည်အနည်းငယ် ပြင်းထန်ခဲ့သလို ရန်သူ့ဖက်မှ အကျအဆုံး၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများရှိခဲ့သည်။ (၃)ထို့အတူ နေ့လည် (၁၁) နာရီ(၂၈) မိနစ်တွင်လည်း ၎င်းရွာနှစ်ရွာအကြားတွင်တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ (၁၁) နာရီ(၃၅)မိနစ်အချိန်တွင် ရဟတ်ယာဉ် (၂) စင်းဖြင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ Northern Alliance – Burma AA + KIA + TNLA+ MNDAA တိုက်ပွဲသတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် မိုင်းအိုက်ကျော် ၀၉၄၉၃၁၄၉၅၁ (0949314951)
A Briefing on Human Rights Violations and War Crimes committed by the Myanmar Army
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၀/၂၁/၂၂ ရက် တိုက်ပွဲသတင်းများ နှင့် မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုများ (၁)ဇန်နဝါရီ(၂၀)ရက်နေ့တွင် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ပန်လုံကျေးရွာနှင့် ပန်ကူကျေးရွာကြားတွင် နံနက် (၈)နာရီ(၄၅) မိနစ်မှ (၁၁) နာရီ(၁၅)မိနစ်အချိန်ထိ မြန်မာစစ်တပ်၊ ခမရ (၅၆၇) နှင့် မိမိတို့ တပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၎င်းတိုက်ပွဲတွင်မြန်မာစစ်တပ်ဖက်မှ (၅) ဦး ကျဆုံးပြီး ဒဏ်ရာရရှိမှုလည်းရှိခဲ့သည်။ (၂) ဇန်နဝါရီ (၂၀) ရက်နေ့တွင် ပန်လုံကျေးရွာအနီးတွင်လည်း မြန်မာစစ်တပ်မှအင်အား ၅၀ ခန့်ရှိသောစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှလာရောက်တိုက်ခိုက်သဖြင့်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ (၃) ဇန်နဝါရီ (၂၀) ရက်၊ညနေ (၄) နာရီ (၃၀) ခန့်အချိန်တွင်လည်း ဖုန်ဂမ်တောင်အနီးတွင် မြန်မာစစ်တပ်၏ တပ်မ (၉၉) နှင့်တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။ (၄) […]
NAB Press Release on 22 Dec 2016
NAB Press Release on 21 Dec 2016